Maxaa loo aaneyn karaa kufsiga ku soo badanaya Soomaaliya? | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Maxaa loo aaneyn karaa kufsiga ku soo badanaya Soomaaliya?
Maxaa loo aaneyn karaa kufsiga ku soo badanaya Soomaaliya?
Kufsiyadii ugu dambeeyay ayaa maalma kahor ka dhacay magaalada Muqisho, kuwaas oo ay ka mid tahay gabar la sheegay in la kufsaday ka dibna la dilay.
Waxaa sidoo kale ka horeeyay falal kufsi oo la sheegay in ay ka dhaceen Deegannada Koonfur Galbeed iyo Puntland. Sidoo kale waxaa jiro warar sheegaya in maalmo ka hor Muqdisho lagu kufsaday ilma yar.
“kufsiga markiisi horeba intan waa uu kasii badnaa”
“Waxyaabaha loo aaneyn karo in kufsiga sheegistiisa uu bato waxaa ka mid ah dadkii oo wax fahmay maadaama markii hore ay ahaayeen kuwa cabursan oo aan sheegi karin dhibka la garsiiyay. Hadda oo ay dowlanimada Soomaaliya xoogeysatay waxaa ay keentay in dad badan ay ku dhiiradaan in ay soo sheegaan ee kufsiga markiisi horeba intan waa uu kasii badnaa”, ayay tiri Jawaahir Baarqab oo ah Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir oo la hadashay BBC-da.
Sidoo kale tiknilojiyadda casriga ee dunida iyo baraha bulshada ayaa qeyb weyn ka qaatay soo gudbinta falalka kufsiga, Sida ay sheegtay Jawaahir.
Maadaama qofwalba uu awoodo in uu baahiyo fal kufsi oo soo jiidan karta dad badan, haddana Jawaahir waxay aaminsan tahay in taa ay leedahay caqabad ah in aan la dhowrin sumcadda iyo xogta khaaska ah ee qofka dhibanaha ah.
“Bulshada ayaa sidoo kale baraarugtay oo dhallinyaradii ayaa ilbaxday, tasina waxay keentay in aysan waxbadan qarsoomin, falal badan oo kufsi ah oo dhacayna la ogaado.
“Sidoo kale maandooriyaha aadka looga isticmaalo magaalooyin sida Muqdisho oo uu taabuuga ka mid yahay ayaa loo aaneyn karaa kufsiga badan”, ayay hadalkeeda sii raacisay Jawaahir.
Maryan Dakhale oo Iyana u ololeysa arrimaha dumarka waxay arrinta la xiriirineysaa “cadaalad la’aan” in ay jirto.
“Waxyaabaha xoojiya kufsiga oo muddooyinkii dambe soo badanayay waxaa ka mid ah cadaalad la’aanta oo qofkii wax kufsada aanan cadaaladda la marsiineynin”, ayey tiri.
Sidoo kale waxay sheegtay: “Mandooriyaha ayaa qeyb weyn ka qaata kufsiga maadaama dad badan oo wax kufsada ay adeegsadaan waxyaabaha maanka dooriya iyo sidoo kale waalidiinta oo dayacay carruurta, warna aan ka heynin halka ay ku sugan yihiin iyo amnigooda”.
Maryan ayaa markii ay maanta BBC-da la hadleysay, waxay ku guda jirtay wax kaqabashada fal kufsi oo ay sheegtay in uu ka dhacay magaalada Muqdisho.
Inkastoo waalidiinta qaar laga yaabo in nolol maalmeed ay ku mashquulsan yihiin, haddana Maryan waxay ku adkeysaneysaa in marwalba loo baahan yahay in waalidiinta ay carruurta ka war hayaan oo ay ogaadaan halka ay aadaan, gaar ahaan xilliyada habeenkii.
Sidee looga hortagi karaa ama looga dabatagi karaa kufsiga?
Jawaahir Baarqab waxay sheegtay in loo baahan yahay in wacyigelin ku aadan kufsiga loo sameeyo bulshada, sidoo kalena dood cilmiyeed ku saleysan kufsiga in la qabto, si sare loogu qaado waaqica jira iyo baraarug dadka.
Maryan Dakhale waxaa kale oo ay sheegtay in loo baahan yahay in la sameeyo xarun dhexe oo dadka ama dhibanayaasha ay wici karaan marwalba oo ay wax dhacaan.
“Si looga hortago isticmaalka maandooriyaha, waxaa loo baahan yahay in la helo sharciga daawada Soomaaliyeed, kaas oo wax ka qaban kara isticmaalka maandooriyaha oo qeyb weyn ka qaata kufsiga”, ayay tiri Maryan.
Maamul goboleedka Puntland ayaa bilo kahor xukun dil ah ku fuliyay rag lagu helay dembi ah in ay kufsadeen gabar yar ka dibna ay ku dileen magaalada Gaalkacyo.
Sidoo kale Maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhawaan dil toogasho kufuliyay laba nin oo lagu eedeeyay in ay kufsadeen wiil yar,.
Dalal badan oo caalamka ah ayaa la daalaa dhacaya wax ka qabashada kufsiga, waxaana ka mid ah dalka Pakistan oo dhawaan uu ka dhacay fal kufsi oo cara badan ka dhaliyay.
Ra’iisul wasaaraha dalkaas, Cimran Khan, ayaa sheegay in qofkii lagu helaa in uu qof kufsaday la dili doono, si cadaalad ay u helaan dadka dhibaneyaasha ah.
Previous articleXOG: Wasiiro Qorshe Cusub Degsaday Kadib Ra’iisal Wasaaraha La Magacaabay
Next articleCulimada Carabta ma waxaa loo shaqaaleysiiyay in ay xayeysiiyaan heshiiska Israa’iil?
Faah Faahin laga bixiyay Geeridii ku Timid Wasiirkii Dastuurka Soomaaliya
Dowlada Turkiga oo baaraya rag looga shakisan yahay dilka Wariye Jamaal Khaashuqji
Dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo ka socda Gobolka Shabeellaha Hoose & Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab………
RW Khayre oo Muqdisho ku soo laabtay, tacsina ugu tegay qoyska Marxuum Ing. Yariisow (Sawirro)
Saraakiil kasocda dowlada masar oo kormeyr kutagay Xarumaha lagu taba baro ciidamada xooga dalka sheegayna anay
Khayre oo Kulan la qaatay Guddiga Wajiga Labaad Ee Dib-u-qaabeynta Ciidamada
Sawirro:-Maxay Ka Wada Hadleen Madaxweynaha Puntland Iyo Madaxda Wasaaradda Maaliyadda?
DEG DEG:Qarax Goordhow Ka Dhacay Magaalada Dhuusamareeb